सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस
धरानमा सोनी हाङ्मा लिम्बुले आ त्मह त्या गरेको घटनाले अर्को मोड लिएको छ ।माइती पक्षले आफ्नो छोरी चेलीको ह त्या भएको दावी गर्दै जा हेरी पनि दीईसकेको छ । त्यसपछि प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागी सोनी हाङ्माको ससुरा, देवर, दुई आमाजू दीदीलाई पक्राउ गरिसकेको अवस्था छ । तर सोनीको श्रीमान युनिक लिम्बुले भने अर्कै दावी गर्दै मिडियामा आएका छन् । घटना सार्बजनिक भएसंगै उनले खुल्ला पत्र लेखेर समेत आफ्नो विचार राखी सकेका थिए । अहिले भने उनि मिडियाको टेलिफोन सम्पर्क मै आएर आफ्नो भनाई राखेका छन ।
यसै बीच सोनी हाङ्माको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु पनि मिडियाको सम्पर्कमा आएका छन । सोनी हाङ्माको श्रीमान युनिकले लगाएको आरोप सरासर झुट हो भन्दै उनले आफ्नो स्पष्टिकरण दिएका छन । डीकेनका अनुसार सोनी हाङ्मा र आफ्नो गाउ एकै ठाउ भएको हुदा उनीहरुको चिनजान धेरै पहिले देखि नै रहेको र सोल्टा सोल्टीको साइनोमा बोल्ने हुनाले अरुले प्रेमी प्रेमिकाको रुपमा हेरेको हुन सक्ने बताए ।
कमलाले दोहोरिमा खुमन अधिकारीलाई समेत हरा’एपछी ( भिडियो सहित )
मोरङ का ण्ड: आमा मा,रेर घाँ टी रे ट्नेले २ जी,उकि बै,नीलाई हरेक दिन यस्तो गर्दा रहेछन । भाग्य न्यौ,पानेलाई रुदै खोलिन भित्री र,हस्य, बै,निको बि,जोक (भिडियो हेर्नुहोस)
शिशुलाई जङ्गलमा भेटाउदा राक्षसको बच्चा भन्दै डराउने आमा मिडियामा । (हेर्नुहोस भिडियो)